Iindaba ezisixhenxe zenyanga kaMatshi. UVargas Llosa, uLackberg, Ibáñez ... | Uncwadi lwangoku
Iindaba ezisixhenxe zenyanga kaMatshi. IVargas Llosa, iLackberg, Ibáñez ...
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | IiComics, Iincwadi, Inoveli, Inoveli emnyama, Inoveli yothando
Matshi ivula ngengqele, imvula, ikhephu kunye nomoya, kwaye nayo ukukhutshwa okutsha kohlelo. Soloko incinci yonke into kunye nawo wonke umntu. Namhlanje ndizisa izinto ezimbalwa inoveli, inoveli yolwaphulo-mthetho kunye nokuhlekisa. Kwaye ngokobuqu ndilugcina olo hlelo lubalulekileyo lwe- NgoNovemba 13, Rue del Barnacle Utitshala u-Ibáñez, ukuba ndinomzimba wehlaya kwezi ntsuku. Kodwa makhe sijonge kwezinye.
1 Umnxeba wesizwe - uMario Vargas Llosa
2 Iintombi zaManzi - uSandra Barneda
3 Ixesha lezaqhwithi - Boris Izaguirre
4 Umfazi oneenwele ezibomvu- u-Orhan Pamuk
5 Intombi emnyama - u-Elena Ferrante
6 Igqwirha-uCamilla Läckberg
7 NgoNovemba 13, Rue del Barnacle. Ushicilelo olubanzi - uFrancisco Ibáñez
Ifowuni yesizwe -Umario Vargas Llosa
ukuthengiswa namhlanje kwiivenkile ezithengisa iincwadi ngu ngobomi bomntu ngokwasengqondweni Ibhaso likaNobel loNcwadi uVargas Llosa. Umbhali usixelela malunga ukufundwa okuphawule ukucinga kwakhe kunye nendlela yokubona umhlaba kule minyaka ingamashumi amahlanu idlulileyo. Amagqabantshintshi uluhlu lwe iingcinga ezikhululekileyo Oko kwamnceda ukuba aphuhlise izimvo zakhe emva kokungathandeki kombhali, okokuqala ngeCuban Revolution kwaye, okwesibini, ngenxa yokuhlukana kwakhe noJean-Paul Sartre, owayemkhuthaze kakhulu ebutsheni bakhe.
Ke sinemifanekiso ye U-Ortega y Gasset, uAdam Smith, uKarl Popper, u-Isaiah Berlin okanye uJean-François Revel phakathi kwabanye, bambonisa enye indlela yokucinga enika amalungelo umntu ngaphezulu kwesizwe, isizwe, udidi okanye iqela. Kwaye ngaphezulu kwayo yonke into bema ngaphandle inkululeko yokuthetha njengexabiso elisisiseko. Ngaphandle kwemeko ethile yombhali.
Iintombi zamanzi -USandra Barneda
Intatheli kunye nombhali waseCatalan bacebisa kule noveli a hamba kwimimandla yendalo kunye nomnqweno wabasetyhini Kwibali elisisa kwi Ngo-1793 iVenice. Pha U-Arabella massari ukusuka kwibhotwe lakhe ujonge ukufika kweendwendwe kwitheko elikhulu lokuzihombisa alilungisileyo.
Phakathi kwabazimeleyo kukho ULucrezia viviani, intombi yomrhwebi uGiuseppe Viviani, oza nomyeni wakhe uRoberto Manin. Kodwa uLucrezia akazimiselanga ukutshata nendoda ayithiyileyo kwaye uya kwenza konke okusemandleni ukukhusela umtshato. Kwaye u-Arabella uyakufumanisa ukuba eli bhinqa liselula lineentloni bakhethelwe ukugcina ilifa loko kubizwa ngokuba ziintombi zamanzi, udade ofihlakeleyo wabasetyhini abalwela ukuba bakhululeke.
Imozulu yesaqhwithi -Boris Izaguirre
Okunye inoveli yobomi bakheNgeli xesha lokufumanisa eyona Boris yobuqu inebali eliqaqambileyo kodwa kunye nebali elithambileyo.
Ulwazi lwakhe lobuntwana yahlukile, iingxaki zakhe zokuqala zemoto kunye ne-dyslexia okanye iifom zakhe zokuziphatha kunye nezimbo zomzimba ezimfanisayo. Ngokujikeleze bona bayaphawula ukuba oku kuchatshazelwe iinkampani ezimbi Inkwenkwe ijikelezwe ngabazali bayo, umdanisi owaziwayo kunye nomgxeki wefilimu. Emva koko kuza iintsuku zesikolo uthando lokuqala, udlwengulo, ukuthula, amanyathelo akho okuqala afana Umbhali wekholamu kunye nombhali telenovelas… Kwaye emva koko kuza udumo España nge IziKronike zikaMartian kwaye ube ngowokugqibela kwi-Premio Planeta.
Umfazi oneenwele ezibomvu -UOrhan Pamuk
Umbhali odumileyo waseTurkey usizisela ibali lothando kunye neparricide eIstanbul yee-1980 kwesi sihloko sitsha. Ngaphandle kweIstanbul, ngo-1985 inkosi kakuhle kunye nomfundi oselula baqeshelwe ukufumana amanzi ethafeni. Ngelixa bemba ngaphandle kwethamsanqa elininzi, a phantse utata kunye nonyana bond, Eziza kutshintsha xa umntwana ofikisayo ethandana ethandabuza ngokungummangaliso umfazi oneenwele ezibomvu. Olu thando lokuqala luya kuphawula ubomi bakho. Kwaye ngeenxa zonke eIstanbul ngumzekeliso welizwe eliguqulwe ngokungenakuphikwa.
Intombi emnyama - Elena Ferrante
Akukacaci ukuba ngubani u-Elena Ferrante. Ngaphantsi kwalonto isibizo umntu osayina lento usafihliwe inoveli emfutshane apho athetha khona ukudideka nokudinwa kokuba ngumama.
Nantsi indlela ibali Unika, Utitshala woncwadi lwesiNgesi olwaqhawula umtshato kudala enikezele ngeentombi zakhe nomsebenzi. Xa baya kuhlala notata, endaweni yokonwabela umnqweno kunye nesizungu kulindeleke, uLeda ngequbuliso uziva ekhululekile kwaye uthatha isigqibo sokuchitha ezimbalwa zeholide kwidolophu encinci elunxwemeni. Kodwa loo mihla yoxolo iphelile xa ngequbuliso ebaleka elunxwemeni kunye unodoli ezandleni.
Igqwirha -Camilla Läckberg
Isihloko sokugqibela segama Uthotho lweFjällbacka, Owona udumileyo kwaye uphumelele kulo mbhali waseSweden weenoveli zolwaphulo-mthetho, kodwa kunye neencwadi zabantwana kunye ne-gastronomy. Ityala elitsha UPatrik noErica, Isibini esikhokelayo sesaga.
Omnye Intombazana eneminyaka emi-4 inyamalale ukusuka kwifama engaphandle kweFjällbacka. Oku kukhumbuza abemi bayo ukuba Iminyaka engama-30 ngaphambili umzila womnye umntwana ofunyenwe eswelekile kungekudala emva koko ulahlekile kwindawo enye. Ke zimbini teen batyholwa bafunyanwa benetyala lokuxhwila nokubulala, kodwa bayiphepha intolongo ngokuba ngabantwana. Omnye wazo, uHelenUkhokele ubomi obunoxolo eFjällbacka kunye nenye, Marie, ngumdlali weqonga ophumeleleyo kwaye ubuya okokuqala emva komnyhadala wokudubula imuvi.
NgoNovemba 13, Rue del Barnacle. Ushicilelo olubanzi - uFrancisco Ibáñez
Ngenxa yezizathu ezivakalayo, ngenxa yokuba ndafunda ukufunda naye kunye nabalinganiswa bakhe abangenakubalwa nabamangalisayo, ndaye ndaphela notitshala uIbáñez. NgoNovemba 13, Rue del Barnacle isenokuba yenye yeehlaya endizithandayo ngalo lonke ixesha. Ngenxa yolwakhiwo lwayo, abalinganiswa bayo abaphambili, izikripthi zayo kunye nemizobo yayo, enexabiso lokuvela kwayo kufanelekile ukuba ibonwe kwaye ibe nayo.
Olu hlelo lubanzi luzisa okokuqala ngqa umqulu omnye onke amaphepha awenzileyo kolu ngcelele. Ukusukela ukuvela kwayo okokuqala kwi 1961, kwiphephancwadi Malume Uyaphila, bebeqhwaba izandla ngamxhelo mnye kuluntu kwaye bebeqhubeka besenza njalo. Bazi abalinganiswa abangenakulibaleka Iincwadi zethu ezihlekisayo, kodwa nembali yethu.
La Umzobo, ulwamvila olukhohlisayo igrocery, i ubutshaba ukusuka eluphahleni lwendlu, uhlala engqubana nababolekisi, inkohlakalo mouse Ukwenza zonke iintlobo zobubi kwabo bangonwabanga gato ukusuka eluphahleni. Inkqubo ye- umnini-pension kunye nabaqeshi bakhe, ezoyikisayo bantwana losapho olumelwane lwe abaphangiNgumhlali wase umjelo ohambisa amanzi amdaka, i Mvelisi wacko okanye ukulungelelanisa, i wezilwanyana… Kwaye i izigcawu izinyuko. Yonke into umzobo ogcwele uburharha kodwa kunye nokugxekwa kwezentlalo into eyenziwa nguIbáñez.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iindaba ezisixhenxe zenyanga kaMatshi. IVargas Llosa, iLackberg, Ibáñez ...
Amabali encoko: Ngaba iGenesis eNtsha yokuFunda?